Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Hagaha Rakibaadda Musqusha Musqusha
2020 / 10 / 02 QoondayntaTilmaamaha qasabada 17309 0
Maalin shaqo ka dib, mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee daalka nooga yareeya ayaa ah inaad qubeysato. Xulashada iyo rakibidda madaxyada qubeyska musqusha ayaa sidoo kale u baahan fiiro gaar ah. Waxay si toos ah ula xiriirtaa tayada nolosheena mustaqbalka, sidaa darteed WOWOW waxay soo bandhigi doontaa habka rakibidda madaxyada qubeyska.
Qaabka rakibaadda musqusha
1. Go'aami cabirka. Cabir cabirka dhinacyada bidix iyo midig ee darbiga si aad u hesho meel wanaagsan oo lagu rakibo madaxa qubeyska; sawiri booska iyo dhererka madaxa qubeyska derbiga sida ku xusan dhererka gaarka ah.
Dhererka madaxa qubeyska ayaa loo qaybiyaa laba nooc iyadoo loo eegayo nooca madaxa qubeyska: Sida ku xusan xeerarka khuseeya, masaafada u dhaxeysa gidaarka qubeyska ee la qariyey iyo bixitaanka derbiga qubeyska la qariyey waa inuu ahaadaa 2.1m dhulka, iyo qubeyska biiro waa inuu ahaadaa 1.1m dhulka; Waxaa lagu qeexay dusha biyaha rusheeyaha, iyo inta u dhexeysa waxaa laga door bidaa 2m. Waa in la ogaadaa in xogtani ay yihiin oo keliya xog isku mid ah, waana in lagu hagaajiyaa iyadoo la eegayo dhererka isticmaalaha markii la adeegsanayo qalabka.
2. Adeegso mashiin qodista si aad ugu qoddo sida ku xusan miisaanka hore loo soo sheegay, kuna rakib isku xiraha qaabeeya S Isku xirahan wuxuu hagaajin karaa jihada wuxuuna fududeyn karaa isku xirnaanta tuubada qubeyska. Wadajirka waa in lagu duubaa cajalad ceyriin ah, tirada leexashadu waa inaysan ka yarayn 30 leexasho, si looga fogaado inay biyuhu ku daataan tuubada biyaha. Ku rakib kursiga wiishka qubeyska iyo qaybta eccentric, ka dibna ku dabool daboolka qurxinta.
3. Si gooni gooni ah u kaxee dhuumaha balaadhinta godka qalabka, kuna hagaaji salka gidaarka darbiga isbaarooyin is-taabanaya. Fiiro gaar ah: Saldhigga derbigu waa inuu ku yaal isla xariiqda isku xiraha tubada tubada.
4. Ku rakib qaybta oo dhan ee qubeyska, ka soo saar tubbada qubeyska, geli suufka lugta lowska, ka dibna ku xir isku xidhka 'S-bend joint', oo si dhammaystiran ugu adkeeya lowska bambaano. Isticmaal heer ruuxi ah si aad u cabirto in tuubadu ay heer tahay iyo in kale.
5. Daboolka hoose ee wareega ku wareeji darbiga, ka dibna ku hagaaji qubeyska darbiga; ka dib marka qubeyska la xalliyo, isticmaal boolal si aad u adkeeysid, gashato tuubada qubeyska, oo aad u dhigto qubayska gacanta.
6. Ka dib rakibidda, shid furaha tubbada biyaha si aad si fiican ugu maydho dhuumaha.
Taxaddarrada rakibaadda Qubayska
1. Dhererka waalka isku qasida dhulka
Xusulka siligga ee gudaha ee qubeyska waa inuu u diyaar garoobaa tallaabada xigta si loo rakibo waalka qasitaanka. Dhererkiisa guud ahaan waxaa gacanta lagu hayaa inta u dhaxeysa 90-110cm. Dhexda, waxaa lagu go'aamin karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha milkiilaha ama celceliska dhererka lammaanaha. 110cm, haddii kale waxay ku sababi doontaa qubayska usha wax qaadista inay ku fashilanto rakibisteeda, oo aan ka yarayn 90cm, ma wanaagsana inaad foorarsato mar kasta oo aad furto waalka.
2. Ku hay sagxad fidsan gidaarka ka dib marka aad ku dhejiso foornada gidaarka
Dhumucda darbiyada derbiyada waa in la tixgeliyaa marka madaxa xariirta la keydiyo, waxaana ugu wanaagsan in 15mm uu ka sarreeyo derbiga qallafsan.
3. Ka taxaddar marka aad dooraneyso goob
Markaad dooranaysid meesha uu ku yaal madaxa qubeyska, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa asturnaantiisa. Guud ahaan, waa inaadan ka dooran albaabka ama daaqadda agteeda. Intaas waxaa sii dheer, haddii aad leedahay musqusha isku dhafan, waa inaad si buuxda ula xiriirtaa milkiilaha cabbirka suuliga isku dhafan ee la soo iibsaday si loo arko meesha ay ku hartay waalka qashinka maydhashada. .
4. Kuma khaldami kartid bidixda kulul iyo qabowga saxda ah
Meesha biyaha ka soo baxa xusulka siligga gudaha ee qubeyska waa in si fiican loo xakameeyo. Bidix iyo midig ma khaldami karaan. Haddii aad khalad samayso, qalabka qaar ayaa shaqeyn kara ama dhaawici kara qalabka. Tan waa in la ogaadaa marka dhuumaha la dhigayo.
Hore:: Waa Maxay Isbedelka Socda Ee Dhamaadka Qasabada? Next: Qalabka Dabaqa Musqusha Heer Caan Ah
2021 / 02 / 03 16444
2021 / 01 / 28 6846